Tag: cision | Martech Zone
Cision dia manampy ny refy marketing amin'ny Influencer amin'ny rahona fifandraisana
Alarobia, Jolay 26, 2017 Alatsinainy Janoary 18, 2021 Douglas Karr
Antony iray lehibe tsy maintsy tadidinao ao amin'ny indostrian'ny Martech ny ankamaroan'ny orinasa dia eo amin'ny tsingerin'ny fanatsarana mitohy mba hanavahana sy hampivoarana ny orinasany. Ilay sehatra nampiasanao taona vitsivitsy lasa izay mety tsy misy intsony. Cision dia iray amin'ireo orinasa izay tsy narahiko loatra araka ny tokony ho izy. Azo antoka fa mpitarika nizara tsena izy ireo raha ny resaka fifandraisana amin'ny daholobe,
Fomba 5 hanatsarana ireo matihanina amin'ny fifandraisana amin'ny daholobe
Talata, Martsa 8, 2016 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Ny personalization dia mampiakatra ny tahan'ny fiovam-po. Tsy teôria izany, ny fahombiazan'ny personalization dia voaporofo hatrany hatrany. Raha matihanina amin'ny fifandraisana amin'ny daholobe ianao, ny fiovam-ponao dia ny fahafahanao manana famoahana na influencer hizara ny tantaran'ny mpanjifanao na ny zava-nitranga. Lojika fotsiny raha manampy azy manokana ny fanovana, fa ny manampahaizana kosa manohy manimba ny fifandraisan'izy ireo (tadidio… izany ny R in PR) miaraka amina rafitra sy teknika fitobiana sy fipoahana. Nanoratra sy nizara ny fomba fampiakarana a